IT KITS aquarium -ka ugu fiican ee bilowga ah, kee baad dooranaysaa? | Ee kalluunka
Xirmooyinka quraaradda oo dhammaystiran ayaa ku habboon in lagu bilaabo, taas oo ah, taageerayaasha adduunka kalluunka iyo aquariums -ka doonaya inay bilaabaan inay yeeshaan quraaradda u gaarka ah. Qiimo macquul ah oo macquul ah, xirmooyinka waxaa ku jira waxyaabo taxane ah oo noloshaada kuu fududeyn doona waxayna kuu gogol xaadhi doontaa si aad u hesho quraaradda ugu fiican.
Maqaalkan ku saabsan quraaradda oo dhammaystiran waxaan ku arki doonnaa cidda loogu talogalay aquariums -yada, waxyaabaha ay inta badan ku daraan iyo noocyada kala duwan, iyo kuwo kale. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkan kale ee ku saabsan heerkulbeegga quraaradda, cunsur kale oo aad u faa'iido badan (oo raqiis ah) si loo hubiyo in kalluunkaagu caafimaad qabo.
1 Xirmooyinka quraaradda ugu fiican ee lagu bilaabo
2 Waa kuwee xirmooyinka quraaradda dhammeystiran ee loogu talagalay?
3 Maxay tahay inay haystaan ​​xirmada quraaradda
3.2 Nalalka LED-ka
3.3 Biyaha kululeeyaha
4 Noocyada xirmooyinka quraaradda
4.2 40 litir
4.3 60 litir
4.4 100 litir
4.5 Iyada oo leh golaha wasiirada
5 Sida loo xisaabiyo inta kalluun ee ku habboon quraaradda
5.1 Cabbirka kalluunka
5.2 Galmada kalluunka
5.3 Dhirta iyo qalabka
6 Halkee laga iibsan karaa xirmada quraaradda oo dhammaystiran oo iib ah
Xirmooyinka quraaradda ugu fiican ee lagu bilaabo
Qalabka Aquarium Fluval ...
Helitaanka Tetra AquaArt ...
Marina 15256 - Xidhmada ...
Aquarium URN Crystal IYADOO...
Waa kuwee xirmooyinka quraaradda dhammeystiran ee loogu talagalay?
Xirmooyinka quraaradda oo dhammaystiran ayaa ku habboon in lagu bilaabo, waana sababtaas sababta loogu talagalay gaar ahaan kuwa xiiseeya kalluunka oo aan muddo dheer joogin waxayna u baahan yihiin badeecad ay ku jiraan dhammaan qalabyada lagama maarmaanka u ah inay bilaabaan.
Sida aan hoos ku arki doonno, xirmooyinka sida caadiga ah waxaa ku jira taxane ah walxaha aasaasiga ahIn kasta oo, iyadoo ku xiran tayada (iyo qiimaha) quraaradda, aaladahaani waxay noqon karaan kuwo aasaasi ah oo fudud ama ku dari kara wax kale, sida qurxinta, alaabta guriga ...
Waxa ugu fiican ee ku saabsan xulashada xirmada marka la bilaabayo hiwaayaddan cusub oo xiisaha leh ayaa ah inaannaan yeelan doonin aasaaska aan ku bilowno, laakiin marka waqtigu sii socdo waxaan dooran karnaa inaan hagaajinno walxahaas aan ka doorbideyno quraaraddayada iyada oo aan loo baahnayn in la sameeyo maalgashi dhaqaale oo aad u sarreeya.
Maxay tahay inay haystaan ​​xirmada quraaradda
Xirmooyinka quraaradda waxaa ku jiri kara waxyaabo badan, laakiin Ugu aasaasiga ah (iyo waxa ay tahay inaad iska ilaaliso ayaa ka tayo wanaagsan) waa kuwan soo socda:
Qodobka ugu muhiimsan ee quraaradda (marka laga reebo kalluunka, dabcan) waa shaandhaynta. Si ballaaran markaan u hadalno, waa waxa ka soocaya aquarium -ka taangiyada kalluunka, maadaama kuwaan ay tahay inaad gabi ahaanba beddesho biyaha, halka shaandhaynta ayaa mas'uul ka ah nadiifinta si loogu soo celiyo nadiifinta quraaradda. Tani waxay u isticmaashaa, marka lagu daro mashiinnada, walxaha sida fiber qumbaha, kaarboon ama perlon, walax la mid ah suufka oo aan ka hadalnay dhowr maalmood ka hor.
Shaandheeyeyaashu waa laba nooc: gudaha, kuwaas oo lagu dhex quusiyay gudaha quraaradda, oo loogu talagalay aquariums -yada yaryar ama kuwa dhexdhexaadka ah, iyo kuwa dibedda ah, oo lagu tilmaamay biyo -mareennada waaweyn.
Waagii hore, iftiiminta biyo -biyoodka waxaa lagu fulin jiray laambado halide bir ah, in kastoo In muddo ah hadda, wax badan ayaa loo doortay LED -yadaKaliya maahan inay aad u qabow yihiin, waxay iftiimiyaan midabyo badan waxayna u muuqdaan kuwo aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay yihiin kuwo tamar badan leh oo soo saara kuleyl yar, wax kalluunkaagu qaddarin doono.
Mabda 'ahaan, nalalka ayaa ah walxaha bilicsanaanta quraaradda ku jira, inkasta oo haddii aad leedahay dhir (yacnii quraaradda la beeray) ay wax is beddelaan, maadaama iftiin ayaa lagama maarmaan u ah dhirta si ay photosynthesize.
Xirmooyinka quraaradda ugu dhameystiran waxaa ka mid ah kululeeyaha biyaha, aalad ku habboon magaceeda iyo tan ayaa mas'uul ka ah kuleylka biyaha heerkulka aad rabto (Sida ugu fudud waa inaad gacanta ku hubisaa heerkulka, oo leh heerkulbeeg, halka ugu dhammaystiranna ay ku jirto dareeme si toos ah u dhaqaajiya oo u baabiiya kuleyliyaha). Kuleyliyeyaasha ayaa si gaar ah waxtar u leh haddii aad ku nooshahay cimilo qabow ama haddii aad leedahay aquarium kalluunka kulaylaha.
Noocyada xirmooyinka quraaradda
Markay timaaddo iibsashada xirmada quraaradda, malaha su’aasha ugu horreysa ee na soo baxdaa waa imisa kalluun oo aan ku haysan karno quraaradda, su’aal ka sii adag sida ay u muuqato (qeybta soo socota waxaan isku dayi doonnaa inaan si kooban uga jawaabno). La socoshada noocyada xirmooyinka, kuwa ugu badan waa sida soo socota:
Aquarium -ka ugu yar dhammaan, badiyaa leh meel ku filan laba kalluun iyo dhirta qaarkeed. Aad bay u qurux badan yihiin, maadaama ay u muuqdaan inay leeyihiin qaabab muuqaal leh. Maaddaama mugga biyuhu aad u yar yahay, aaladaha (asal ahaan bamka iyo shaandhaynta) waxay u muuqdaan inay ku dhex milmaan quraaradda, sidaas darteedna waxay qaataan meel yar.
Biyo yar yar oo weyn, in kasta oo ay weli ku jirto baaxadda dhexdhexaadka. Si aad u ogaato tirada kalluunka aad gelin karto, waa inaad xisaabisaa inta dhir, jayga iyo qurxinta la isticmaalo, iyo sidoo kale qiyaasta celceliska kalluunka marka ay qaangaar yihiin. Caadiyan xisaabintu waa qiyaastii 5 kalluun, in kasta oo xisaabtu kala duwanaan karto iyadoo ku xiran baaxadda kalluunka. Iyaga oo aan aad u weynayn, aquariums -yadu sidoo kale waxaa ku jira shaandhaynta, iyo suurtogalnimada qalabyo kale, gudaha.
Inta u dhaxaysa aquariums -ka dhexdhexaadka ah waxaan ka helnaa kuwa 60 litir, taas oo runtii ah iyagu waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu bilaabi karo. Kalluumeysiyada yaryar iyo kuwa waaweyn ayaa aad u adag in la maareeyo, si sax ah baaxaddooda awgeed, dhanka kale, 60-litir ayaa leh qaddarka ugu habboon ee lagu bilaabi karo, maadaama uusan aad u weynayn ama aad u yarayn. Kalluumeysiyadan badiyaa waxay qabtaan qiyaastii 8 kalluun.
Waxaa jira xulashooyin aad u qabow oo ku dar wax kasta oo aad u baahan tahay. Sida ku jirta aquariums -yada yaryar, sida caadiga ah waxay horeba ugu rakiban yihiin quraaradda. Qaarkood sidoo kale waxaa ku jira iftiin habeen iyo maalin si aad u siiso iftiinka saxda ah ee kalluunkaaga iyo dhirtaada.
BETTASHOP.ES QAARIIMS KA ...
Cabbir aad u weyn, kaas oo qiyaastii 12 kalluun ayaa ku habboonaan kara, in kasta oo, sida had iyo jeer, ay ku xirnaan doonto xajmiga xayawaanka, booska ay ku jiraan aaladaha ... Biyaha -biyo -biyoodyadu hadda kuma sii jeedaan kuwa bilowga ah, laakiin waxay ku wajahan yihiin kuwa la bilaabay. Qalabyada, sida shaandhaynta, hadda lama rakibo oo marmarka qaarkood xitaa dibedda, waa calaamad cusub oo ah in qof walba uusan heli karin.
Iyada oo leh golaha wasiirada
Aquariums leh alaab guri, Ka sokow noqoshada mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan liiska, waxaa ku jira gabal alaab ah oo ku habboon cabbiraadda quraaradda. Waxa runtii xiisaha u leh moodooyinkan ayaa ah in alaabta guriga dhexdeeda aad ku haysan karto dhammaan qalabka aad u baahan tahay, marka lagu daro, waxaa jira kuwa ay ku jiraan nidaamka buux -dhaafka degdegga ah iyo wax walba. Shaki la'aan, habka ugu fiican uguna quruxda badan ee lagu helo quraaraddaada.
Badbaadinta Badweynta AT641A Nano ...
Biyaha badda Iyagu waa kuwa ugu adag in la hayo, maadaama ay yihiin kalluun aad u jilicsan waana inaad heshaa biyo aad u deggan, ama nidaamka deegaanka oo dhan ayaa laga yaabaa in la carqaladeeyo. Hadana iyagu waa kuwa ugu quruxda badan uguna quruxda badan. Taasi waxay tidhi, waxaa jira xirmooyin biyo -biyood oo ku siinaya aaladaha ugu horreeya ee aad u baahan doonto si aad isugu ururiso, sida nidaamka shaandhaynta iyo xitaa dimmer hore loo qaabeeyey.
Aquariums -ka ugu jaban waxay leeyihiin laba shay: waxay leeyihiin mug yar oo biyo ah waana biyo macaan. Haddii aadan rabin inaad noloshaada ku adkeyso oo aad haysato labo kalluun oo kaliya, kuwani waa xal wanaagsan. Waa inaad hubisaa inay haystaan ​​nidaam sifeyn oo wanaagsan iyo inaad nadiifiso. Dabcan, haddii cayayaanku ku qaniino oo aad rabto inaad iibsato kalluun badan, waxaad u baahan doontaa aquarium weyn.
Sida loo xisaabiyo inta kalluun ee ku habboon quraaradda
Marka la xisaabinayo imisa kalluun ayaa ku habboonayn quraaraddaada?, xeerka ugu badan ayaa ah in hal sentimitir oo kalluun ah uu ku habboon yahay litir kasta oo biyo ah. Taasi waa sababta ay tahay inaad u sameyso xisaabinta taxane ah oo ku saleysan kuwa soo socda:
Dabiici ahaan, cabbirka kalluunka ayaa ah waxa ugu horreeya ee la tixgeliyo marka la xisaabinayo inta ku habboon quraaradda. Had iyo jeer samee xisaabta ku salaysan baaxadda dadka waaweyn ee kalluunku gaadhi doono (marar badan, markaad iibsanayso, weli way yar yihiin mana dhammayn koritaankooda. .Tusaale ahaan, quraaradda badda dhexdeeda saamigeedu waa hal litir oo biyo ah sintimitir kasta oo kalluunku cabbiro, halka biyaha macaanna uu yahay kala bar, 0,5 sentimitir litir kasta oo biyo ah.
Sababta waa mid fudud: haddii aad haysato kalluun lab iyo dhaddig ah, oo aad uga tagto rabitaankooda xorta ah, way tarmi doonaan, waxa leh waqti yar gudaheed waxaad ku heli doontaa aquarium ilaa afkeeda. Kalluun aad u badan ayaa u horseedi kara oo keliya qol yar oo lagu dabbaasho, taas oo horseedi karta dagaallo dhuleed, laakiin sidoo kale waxay kordhisaa burburka (sida saxaro) oo shaandhayntu aanay nuugi karin, taas oo saamayn karta tayada biyaha iyo, taas awgeed, caafimaadka kalluunkaaga.
Ugu dambeyntii, dhirta iyo agabka (sida figurines) ee aad ku ridi doonto quraaradda ayaa iyaduna qayb ka ah marka la xisaabinayo inta kalluun ee ku habboon quraaradda -biyahaaga, maadaama ay qaadan doonaan boos (ka tegista meel yar oo lagu dabbaasho) oo waliba soo saari kara qashin (ugu yaraan dhirta nool). Isla sidaas ayaa ku dhacda jayga hoostiisa, waa inaad xisaabisaa inta ay le'eg yihiin si ay u fuliyaan xisaabinta ugu dambeysa.
Halkee laga iibsan karaa xirmada quraaradda oo dhammaystiran oo iib ah
Waxaad ka heli kartaa xirmooyinka quraaradda oo dhammaystiran, iib ah ama aan ahayn, meelo aad u yar. Kuwa ugu caansan oo lagu taliyay waa kuwan soo socda:
AmazonSababtoo ah tirada biyo -biyoodka kala duwan iyo qiimayaasha, waxaa laga yaabaa inaad haysato ikhtiyaarka aad raadineyso. Intaa waxaa dheer, wax maskaxda lagu hayo waa in ay leedahay nidaam gaadiid oo aad u wanaagsan, gaar ahaan haddii aad qandaraas la gashay ikhtiyaarka Ra'iisul Wasaaraha, sidaa darteed waxaad guriga ku haysan doontaa quraaradda ku dhawaad ​​waqti la'aan.
En dukaamada waaxda sida Carrefour Waxa kale oo jira ikhtiyaarro xiiso leh, in kasta oo aysan u kala duwanayn sida meelaha kale. Si aad u hesho dalabka ugu fiican, la soco shabakadda, maadaama ay jiraan xulashooyin onlayn ah oo aad u xiiso badan iyo qiimo dhimisyada ugu fiican.
Ugu dambeyntii, gudaha dukaamada xayawaanka ee gaarka ah sida Kiwoko waxaad sidoo kale ka heli doontaa aquariums kala duwan oo badan. Waxaa si weyn laguugula talinayaa inaad booqato dukaanka jirka haddii aad markii ugu horraysay iibsanayso quraaradda, maadaama dadka wax iibiya ay wax weyn tari karaan haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo u baahan jawaabo.
Xirmooyinka quraaradda oo dhammeystiran ayaa ku habboon in lagu bilaabo maxaa yeelay waxay haystaan ​​dhammaan qalabkii lagama maarmaanka u ahaa in la isugu soo ururiyo gabalkaaga yar ee webiga (ama badda). Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani waxtar kuu lahaa. Noo sheeg, miyaad soo iibsatay xirmo aad ku bilaabi lahayd mise waxaad bilowday inaad adigu adkayso? Waa maxay cabirka iyo noocyada aad ku talinaysaa? Waa maxay khibradaadu?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » Quraaradda buuxda